iPhone X Review for Nepali Customers: Best ever iPhone, Released by Apple
iPhone X Review: एप्पलद्वारा सार्बजनिक गरेको उत्कृस्ट फोन
यो आइफोन X सामान्य परिचय :
अन्बक्सिंग तथा डिजाइन
iPhone X Overview:
आइफोन X अथवा आइफोन १०, यो फोनको नाम उच्चारण गर्न अलिकति अलमलको स्थिति भए पनि यो फोन आफैमा उत्कृस्ट फोन हो। एप्पलको सस्थापक स्टिब जब्सको आइडोलोजीलाई पनि अहिलेको चिफ एक्ज्युकेटिभ अफिसर टिम कुकले उछिन्नेको छ। यसमा पहिलाको आइकोनिक होम कि र स्क्रिन साइजलाई पुरानो मान्यता भन्दा पृथक तरिकाले बिकास गरेको छ।
बास्तबमा पछिल्लो दशकमा एप्पल कम्पनीले यो मोबाइल क्षेत्रमा धेरै ठुलो कुराहरुको योगदान गरेको छ जस्तै टच स्क्रिन, ग्लास डिजाइन, फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फोर्स प्रेस, पोर्टेट मोड आदि। हामीले पनि देख्दै आएको कुरा के हो भने प्रत्येक नयाँ फोनमा एप्पलले कुनै नयाँ प्रबिधि भित्र्याईरहेको छ जुन करोडौ विश्वभरिको ग्राहकहरुको हातमा पुगिरहेको हुन्छ र अहिले पनि एप्पलले त्यहि कुरालाई निरन्तरता दिएको छ।
फेस आइडी जुन कुनै बेला अनौठो थियो तर अहिले एप्पलले यसलाई बायोमेट्रिक सुरक्षाको रुपमा यसलाई विकास गरेको छ। एप्पल कम्पनि के कुरामा निर्धक्क थियो भने यो फेस आइडी फिचरले टच आइडी फिचरलाई बिस्थापित गर्नेछ। यो फेस आइडी सेन्सरले सेल्फी तथा अनुहारको एक्स्प्रेसनलाई पनि ट्र्याकिङ्ग गर्न गर्न सक्ने भयो।
अनि अर्को महत्वपुर्ण कुरा के हो भने यो फोनक बेजेल बिनाको रहेको छ। बेजेल भनेको के हो भने फोनको स्क्रिन र फोनको फ्रेमको बिचको बोर्डरलाई बेजेल भनिन्छ। यो बेजेल फिचरलाई हटाउनु पनि आफैमा क्रान्तिकारी कदम थियो र एप्पल कम्पनिले यो फोनमा पुरै स्क्रिनमा ढालेको छ।
यो आइफोन X लाई उत्कृस्ट बनाउन एप्पल कम्पनीले हर सम्भब प्रयास गरेको छ। बिल्कुलै नँया AMOLED HDR स्क्रिनको साथमा यो बजारमा आएको छ। त्यस्तै नया स्टिल फ्रेम। त्यस्तै उत्कृस्ट चिप्सेट, त्यस्तै नया डेप्थ पता लगाउन सक्ने फ्रन्ट क्यामेरा, त्यस्तै वाइरलेस चार्जिङ्ग आदि।
कतिपयले के भन्छ भने यो आइफोन X को स्क्रिन साइज आइफोन ८ को भन्दा अलि ठुलो नै भयो तर यो कुरा बास्तबमा सत्य पनि हो। अलि सानो साइजको मात्र बोक्ने बानि परिरहदा यो अलि ठुलो नै हुदा केहि असहज पनि हुन सकिन्छ तर यसको नया अपरेटिङ्ग सिस्टमले यसलाई आकर्षण प्रदान गरेको छ। एप्पलको इतिहासले यो कम्पनीलाई नयाँ नयाँ प्रबिधि भित्र्याउने जस मिल्छ भने त्यस्तै नयाँ नयाँ प्रबिधिहरुमा अरु कम्पनि भन्दा निकै अगाडी दौडिरहेको आभाष पनि मिल्छ। आइफोन ८ पछिको नयाँ फोन भएकोले यसले पुरानो ग्राहकहरुलाई आकर्षण गर्न कुनै कसर बाँकि राखेको छैन।
हेरौ अब यो आइफोन X मा के कस्तो विशेषताले भरिपुर्ण छ भनेर।
आइफोन X प्याकेज
यो आइफोन X बजारबाट किन्दा फोनको साथमा तपाइले ५W को चार्जर, केवल, एअरपड, एडप्टर पाउनुहुन्छ।
आइफोन X को नाप तथा तौल सम्बन्धमा
आइफोन X को आफ्नो नाप 143.6 x 70.9 x 7.7 mm रहेको छ जुन आइफोन ८ भन्दा ५ मिलिमिटरले अग्लो छ। त्यस्तै सामसुङ्ग मोबाइलको ग्यालेक्सी S8 भन्दा ५ मिलिमिटर छोटो रहेको छ। त्यस्तै यसको तौल १७४ ग्राम छ जुन आइफोन ८ भन्दा २६ ग्राम धेरै हो।
साइजको सन्धर्भमा आइफोन ८ र ८ प्लस संग तुलना गर्दा त्यो बेजेल फिचर्स हटाउदा परिणाम राम्रो प्राप्त गरेको देखिन्छ। आइफोन ८ भन्दा धेरै ठुलो तथा ८ प्लस भन्दा केहि ठुलो देखिन्छ।
पछिल्लो बर्षहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने एप्पलले एउटै डिजाइन भित्रै खेलिरहेको भान हुन्थ्यो तर जब यो आइफोन X आयो डिजाइनको सन्धर्भमा सबै कुराहरु परिबर्तन भएको छ।
के यो पुर्णतय नयाँ डिजाइन नै हो त ?
यो आइफोन X को स्क्रिन हेर्ने हो भने यो पूर्णतय नयाँ डिजाइन नै हो भन्ने लाग्छ। बेजेल बिनाको स्क्रिनले आइकोनिक होम कि लाई बिस्थापित गरेको, टच आइडीलाई पनि बिस्थापित गरेको तर ग्राहकले पाएको महत्वपूर्ण कुरा चाहि के हो भने एकदमै नयाँ AMOLED स्क्रिन पाएको छ।
तपाइले यो फोनको पछाडी पट्टी हेर्नु भयो भने तपाईले परिचित ग्लास नै देख्नुहुनेछ। एप्पल कम्पनीले आइफोन ८ देखि ग्लासलाई नै प्रयोग गरेको छ जसले ग्राहकहरुलाई पनि सन्तुष्टि प्रदान गरेको छ। बास्तबमा भन्ने हो भने एप्पल कम्पनि नै हो कि ग्लासको प्रयोगलाई उत्कृस्ट बनाएको र हामीले फेरी पनि यो आइफोन X मा त्यहि प्रयोगलाई देख्न पाउनेछौ।
यो फोनको पछाडिको भाग एकदमै सफा रहेको छ तर क्यामेराको भागले मात्र हो तपाइलाई अलिकति असजिलो पार्न सक्नेछ। क्यामेरा ठाडो पोजिसनमा रहेको छ अनि यसको आकृति त्यस्तो नराम्रो भनिहाल्नु पर्ने स्थिति पनि छैन।
त्यस्तै Stainless स्टिलको फ्रेम रहेकोछ जसले सबैलाई एकैठाउमा एकीकृत गरेको छ। फ्रेमको प्रयोगले यो फोनलाई अलिकति गह्रौ बनाएको छ अनि उच्च चमकदार फिनिसिंगले पनि यसलाई कोर्न सजिलो हुने देखिन्छ। तर सबैतिर फिंगरप्रिन्टको धब्बाको कारणले त्यस्तो केहि चोटपटक जस्तो देखिदैन।
एप्पलले फ्रेमलाई मात्र बढावा दिएको हैन कि, यसको स्क्रिनमा फ्रेम र स्क्रिन ग्लासको बिचमा थप रबर गास्केट प्रयोग गरेको छ जसको कारणले यसलाई ठक्कर लाग्दा टुठपुठ हुनबाट जोगाउछ भने AMOLED लाई पनि जोगाउछ। स्क्रिन ग्लास कर्भ आकारमा छैन त्यसैले यसलाई एप्पलले सबैभन्दा मजबुत भनेर बिज्ञापन गरेको छ। मजबुत भए ता अरु भन्दा सजिलै कोर्न मिल्ने हुनाले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।
आइफोन X पहिलाको मोडेल आइफोन ८ भन्दा धेरै ठुलो नभएको हुनाले यो फोन बोक्दा धेरै गार्हो पर्दैन। यसको ठुलो स्क्रिन फोनको बडी भित्रै फिट हुन खोजेको छ जुन हेर्दैमा आकर्षण रहेको छ।
बास्तबमा तपाईले यो फोनलाई एउटै हातले पनि जुनसुकै बेलामा चलाउन सकिन्छ, स्क्रिनको जुनसुकै भागमा पनि तपाई पुग्न सक्नुहुन्छ। यो आइफोन X संग धेरै चिज आएको छ कि यसले आउनेवाला फ़ोनहरुको स्तरलाई उच्च ठाउमा पुर्याउनेछ। पुरै स्क्रिनको अगाडीको भागले धेरै कुरा बताउछ।
आइफोन X को फ्रन्ट साइड धेरै परिबर्तन भएको छ जहाँ होम कि लाई हटाईएको छ, पुरै भागलाई स्क्रिनमा बदलेको छ। सेल्फी क्यामेरा जुन इन्फ्रारेड क्यामेरा हो त्यसलाई प्रस्ट नदेख्ने गरि रखिएको छ, डट प्रोजेक्टर, Flood illuminator जस्तो बिशेषता फेस आइडीको लागी अनिबार्य रहेको छ।
भोलुम कि र साइलेन्ट स्विचलाइ देब्रेपट्टि राखेको छ भने पावर कि र सिम स्लटलाई दायाँतिर राखेको छ। माथिल्लो भाग खालि छ भने तलको भागमा लाइटनिङ्ग पोर्ट र दुइ ओटा डटेट ग्रिल रहेको छ, एउटा मुखको लागी भने अर्को दोश्रो स्पिकरको लागी। पछाडी भागमा दुइ ओटा क्यामेरा रहेको छ। यसमा दुइओटा क्यामेरा सेन्सर छ भने क़्वाड LED फ्ल्यास रहेको छ।
आइफोन X को सबै भन्दा प्रतिक्षित विशेषता भनेको चाहि अबश्य पनि त्यहि ५.८ इन्च को AMOLED HDR सपोर्ट गर्ने स्क्रिन हो भने यसको रिजोलुसन ११२५x२४३६px हो। सिजोलुसन पिक्सेल डेन्सिटि ४५८ppi रहेको छ। स्क्रिनको रेसियो १९:५:९ रहेको छ। माइक्रोस्कोपले AMOLED लाई हेर्दा खेरि के कुरा देखिन्छ भने हिराको आकृति देखिन्छ।
एप्पलले यस फोनमा ब्राइटनेस ६२५ निट्स र १,000,0000:१ कन्ट्रयास रेसियो प्रदान गरेको छ जसको कारणले ग्राहकले सबैभन्दा चम्किलो OLED भएको मोबाइल प्राप्त गर्न पुग्नेछ।
जहाँसम्म आइफोन X को स्क्रिनको कलरको बारेमा हेर्नुपर्दा हामी के कुरामा बिश्वस्त रह्यो भने यसमा सबैभन्दा राम्रो १.९ को डेल्टा ई (Delta E) रहेको छ र २.९ को म्याक्सिमम डेभियसन रहेको पाउछौ। केहि फोन मात्र यो आइफोन जस्तै राम्रो रहेको छ तर यसको उत्कृस्ट डिस्प्लेले यो फोनलाई अरुको तुलनामा अझै उच्च स्तरमा पुर्याईदिएको छ।
आइफोन X ले सन लाइटको लेजिबिलिटि टेस्टमा अरु फोनलाई पछि परेको छ र अत्यन्तै उत्कृस्ट कनट्र्यास्ट रेसियो अरु सबै फ़ोनहरुलाइ उछिनेको छ।
आइफोन X मा Li-Po 2,716 mAh ब्याट्री रहेको छ। लो पावर मोडमा हुदा २०% भन्दा तल चार्ज भयो भने यसले ब्याट्रीलाई अझै धेरै समय टिकाउछ। आइफोन X मा ५V/१A चार्जर सगै आउछ जसले २०% चार्ज कम भएको ब्याट्रीलाई आधा घण्टा भित्रमा फेरी चार्ज बढाईदिञ्छ।
आइफोन X ले फास्ट चार्जिंग USB-C को सहयोगले सपोर्ट गर्छ त्यसको लागी तपाईलाई USB-C-to-Lightnin (म्याकबुकबाट चाज गर्न मिल्ने ) केवल किन्नु जरुरी छ जसले तपाईलाई ४५ प्रतिशत मात्र रहेको ब्याट्री आधा घन्टामा मै चार्ज गर्न सकिन्छ।
तर अझै चाडै चार्ज गर्ने सोच्छ हो भने १२W को आइप्याड चार्जर प्रयोग गर्नुपर्छ। यो म्यकचार्जर भन्दा अलि सस्तो नै पर्छ।
पुरा चार्ज हुदा यसले १९ घण्टा जति ३G कल गर्न सकिन्छ भने साढे ९ घण्टा जति इन्टरनेट चलाउन मिल्छ, त्यस्तै भिडियो मात्र हेर्ने हो भने लगभग १२ घण्टा जति समय सम्म ब्याट्री टिक्छ। त्यतिकै मात्र राख्ने हो भने पनि यो फोनको ब्याट्रीले ७४ घण्टा जति काम दिन्छ।
आइफोन X ले LTE Cat. 12 (up to 600Mbps down, 150Mbps up) सपोर्ट गर्छ भने भने धेरै रेन्जको LTE bands कभर गर्छ। आइफोन X ले LTE (VoLTE), HD Voice and Wi-Fi calling protocols सबै सपोर्ट गर्छ तर कुन नेटवर्कको सिम हो त्यसमा भर पर्छ।
पछिल्लो Wi-Fi र Bluetooth5स्ट्याण्डर्ड पनि सपोर्ट गर्छ।
यसमा NFC पनि सपोर्ट गर्छ जसको श्रेय iOS 11’s new Core NFC API लाई दिन सकिन्छ।
आइफोनले डाटा सार्न, चार्जिङ्ग तथा अडियो को लागी Proprietary Lightning connector प्रयोग गर्छ। यसमा सिमित मात्रको USB Host support रहेको छ। यसमा ३.५ मिलि मिटरको अडियो ज्याक छैन तर तपाइले वाईरड हेडफोनको लागी Lightning-to-3.5mm एडप्टर प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ।
आइफोन X मा iOS 11 हुन्छा जहाँ होम की हुनेछैन। यो भर्सनको अपरेटिङ्ग सिस्टममा नयाँ डिजाइन, नयाँ उपयोगी बिशेसता तथा उच्चस्तरको मेसिन लर्निङ्ग समाबेश भएको छ।
होम की लाइ हटाउनुको साथै त्यहाँ बाट टच आइडी हटेको छ जसलाई फेस आइडीले बिस्थापित गरेको छ। यो आइफोन X ले एउटै मात्र अनुहारलाई सम्झन सक्छ जुन अत्यन्तै उपयोगी छ सुरक्षाको दृष्टिले।
यसमा १ मिनेट भन्दा पनि कम समयमा नै फेस आइडी सेट गर्न सक्नेछ जुन टच आइडी जतिकै छिटो काम गर्छ, यसको मतलब के हो भने तपाइँले आइफोन X सेकेन्ड भित्रमै अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। फेस आइडीले तपाइको टोपी, अनुहारको बर्ण जस्तो कुराको माध्यम फेस चिन्ने काम गर्छ। मेसिन लर्निङ्ग जस्तो बिशेसताले गर्दा तपाइको उमेर बढ्दै जादा पनि केहि फरक पर्दैन।
एउटा दिक्कको चाहि के हो भने अनलक गर्न फेस आइडी भेरिफाइड भईसकेर पनि बटनबाट स्वाइप गर्नुपर्छ। बटन बाट मात्र भन्दा पनि जुनसुकै ठाउबाट स्वाइप गर्न मिल्ने भए सजिलो हुनेथियो तर सधै बटनबाट मात्र गर्नुपर्दाको स्थितिमा अलि झनझड हुन सक्छ।
सामान्यतय सबै एप्पहरु होम स्क्रिन मै जान्छ अनि विजेट्स पनि छैन। अलि ठुलो स्क्रिन भएकोले एप्पहरुको लागी अलि धेरै रोव रहेको छ। होम कि नभएको हुनाले एप्प्स बन्द गर्न एप्पलले सिस्टम वाइड जेस्चर फिचर्स ल्याएको छ, बटनबाट स्वाइप गर्दा हुने गरि।
एप्पलको नयाँ चिप बिना यो आइफोन X नयाँ जेनेरेसनको हुन सकिदैन जहाँ A11 Bionic प्रयोग भएको छ। एप्पलले आफ्नो पहिलाको प्रोसेसर quad-core processor बाट सिक्स कोर को एप्पलले नै डिजाइन गरेको GPU मा फड्को मारेको छ।
A11 Bionic chip मा दुइ ओटा उच्च क्षमताको 2.39GHz Monsoon cores रहेको छ जुन 2.34GHz Hurricane भन्दा 25% धेरै क्षमतायुक्त हुन्छ। त्यस्तै चार ओटा Mistral cores को क्षमता थोरै पावरको Zephyr cores भन्दा 75% धेरै क्षमता हुन्छ। यी सबै ६ ओटा core हरु एकैचोटी काम गर्छ।
यो एप्पलले बनाएको GPU मा तिन ओटा core रहेको छ भने जसले 30% भन्दा धेरै पर्फर्मेन्स दिन्छ। नयाँ A11 chip ले उच्च स्तरको 10nm manufacturing प्रोसेस प्रयोग गरेको हुन्छ जसको कारणले यो अलि सानो तर धेरै क्षमतायुक्त रहेको छ।
A11 Bionic मा dual-core Neural Engine प्याक भएको हुन्छ। यसले AI machine learning को लागी हार्डवयरको काम गर्ने गति उच्च पार्छ।
Machine learning मा निर्भर रहेको हुनाले आइफोन X ले काम गर्ने गति बढ्ने जासको कारणले अति जटिल कामहरु जस्तै अनुहार चिन्ने तथा फोटो प्रोसेसिङ्ग जस्तो कामहरु छिनभरमै गरिदिन्छ।
iOS 11 Phone र Contacts एप्प पहिलाको जस्तै रहेको छ तर केहि Stylized titles रहेको छ। ब्ल्याक लिस्टिंग फिचर्स पनि उपलाब्ध रहेको छ।
फेस टाइम फिचर प्रयोग गरेर अरु फेस टाइम भएको फोनमा भोइस कल तथा भिडियो कल गर्न सकिनेछ। अनि साथमा यसले भिडियो कल भैरहदा लाइभ फोटो पनि लिन सक्नेछ। एप्पलले Wi-Fi calling सुबिधा पनि थपेको छ। यदी कुन सिम दिने नेटवर्कले सपोर्ट गर्छ तपाइले Wi-Fi कल गर्न सकिनेछ।
आइफोन X मा सबैभन्दा ठुलो स्वरमा सुन्न सकिनेछ। यसमा भएको दुइ ओटा स्पिकरले स्वरलाइ सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ।
आइफोन X मा dual-12MP (wide+telephoto) क्यामेरा रहेको छ। वाइड एङ्गल सेन्सर f/1.8 लेन्सको पछि रहेकोछ। यो फोन मा सोनीको Sony Exmor RS sensors छ जसको wide-angle क्यामेराको साइज 1.22 µm pixel साइजको छ। यसमा नयाँ फोटो प्रोसेसर तथा ध्वनि घटाउने अल्गोरिदम रहेको छ र A11 चिपको सहायताले यो फोन रियल टाइम फोटो विश्लेषण गर्न सक्षम रहेको छ। एप्पल पछिल्लो समयमा AR तथा AR संग सम्बन्धित एप्पहरुको लागी बिशेष काम गरिरहेको हुनाले क्यामेरा लेन्सहरु Factory-calibrated गरेको हुन्छ जसको कारणले AR को लागी राम्रो गर्छ।
क़्वाड LED dual-tone flash पनि यो फोनमा उपलब्ध रहेको छ। यसमा Portrait mode दुवै क्यामेराको लागी उपलब्ध रहेकोछ। क्यामेराली आकृतिलाई स्क्यान गर्छ अनि अझ सजिलो बनाइदिन्छ।
फ्रन्ट क्यामेराको 7MP unit को क्यामेरा रहेकोछ। यसले Retina flash लाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो फोनले सेल्फी खिच्नको लागी फेस आइडी सेन्सर फिचरलाई प्रयोग गर्छ जसको कारणले एकदमै उच्च गुणस्तरको मुख्य क्यामेराले खिचेको जस्तै फोटो प्राप्त गर्न सकिन्छ।
आइफोन X मा नयाँ भिडियो रेकडिङ्ग मोडहरु रहेको छ जहाँ 4K at 60fps र 1080p at 240fps को भिडियो खिच्न सकिनेछ। यस्तो फिचर्सहरु जुनसुकै बेला पनि उपलब्ध हुन्छ तर क्यामेरालाई फोटो र भिडियो उच्च क्षमताको फर्म्याटमा सेट गरिराख्नु पर्दछ। साथमा नयाँ फिल्म मोड 4K at 24fps पनि रहेको छ। यस्तो सबै प्रकारको मोडहरु क्यामेराको लागी उपलब्ध रहेको छ।
आइफोन X हरेक द्रिस्टिकोणमा बिशेष फोन रहेकोछ। पहिलो पुरै स्क्रिनलाई फ्रन्ट बनाइएको, फेस आइडी आदि। यो फोन डिजाइनको हिसाबमा उत्कृस्ट तथा सबै भन्दा स्क्रिन, अतुलनिय पर्फर्मेन्स तथा उच्च गुणस्तरको क्यामेरा बिशेषता। स्पीकर पनि उत्कृस्ट तथा फेस आइडी फिचर्सको उपयोगिता एकदमै उच्च रहेको छ।
यसको अपरेटिंग सिस्टम iOS ले पहिलो चोटी धेरै ग्राहकको मन तान्न सफल भएको छ। उत्कृस्ट डिजाइनमा निकालिएको यो अपरेटिङ्ग सिस्टम बास्तबमा हेर्न लायक बनेको छ।